Inona no ilana ny streptomycin? - BALLYA
Posted on Desambra 19, 2020, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe streptomycin?
Vokatry ny Streptomycin
Streptomycin dia antibiotika aminoglycoside. Aminoglycosides dia antibiotika glycoside niforona tamin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny siramamy amine sy ny alika siklikà amino amin'ny alàlan'ny tetezana oksizenina. Ny antibiotika Aminoglycoside dia manakana ny syntetika proteinina ary antibiotika bakteria amin'ny dingana mijanona. Mampiavaka azy ny bacilli gram-négatique anti-aerobic, Pseudomonas, tuberculosis, ary staphylococcus. Koa satria ny antibiotika aminoglycoside dia tsy maintsy aerobika hamelezana vokatra miady amin'ny bakteria, dia tsy mahomby amin'ny bakteria anaerobika izy ireo. Ny zava-mahadomelina Aminoglycoside dia manana ambaratongam-pahavitrihana isan-karazany, nephrotoxicity ary sakana neuromuscular.
Tamin'ny 1943, Ph.D. tany amin'ny University of California, Berkeley, Salman A. Waxman nanokana azy io Streptomyces, ary io no antibiotika faharoa novokarina ary nampiasaina tamin'ny fampiharana ara-pahasalamana taorian'izay penisilinina. Waxman koa dia nahazo ny loka Nobel tamin'ny Physiology na Medicine tamin'ny 1952. Ny vokatra manokana an'ny streptomycin manohitra tuberculosis bacillus dia nanokatra vanim-potoana vaovao fitsaboana tuberculosis. Nanomboka teo, ny tantaran'ny Mycobacterium tuberculosis izay nanapotika ny ain'olombelona nandritra ny an'arivony taona maro dia azo tanterahina voalohany.
Streptomycin dia antibiotika nalaina avy tamin'ny volo kolontsaina Streptomyces griseus. Izy io dia an'ny compound aminoglycoside fototra, izay mamatotra ny proteinina ao amin'ny vatana proteinina asidra ribonucleic an'ny Mycobacterium tuberculosis ary mihetsika manelingelina ny synthesiônan'ny proteinina Mycobacterium tuberculosis, ka mamono na manakana ny fitomboan'ny Mycobacterium tuberculosis.
Koa satria somary kely ny valin'ny fanaintainana amin'ny tsindrona intramuscular an'ny streptomycin, dia mety amin'ny fampiasana klinika. Raha mbola voafantina tsara ny tanjona ary mety ny fatra, ny ankamaroan'ny marary dia azo tsindrona mandritra ny fotoana lava (matetika eo amin'ny 2 volana). Noho izany dia mbola io no zava-mahadomelina lehibe indrindra amin'ny fitsaboana anti-tuberculosis am-polony taona maro.
2. Fampiasana Streptomycin
Streptomycin dia famonoana bakteria mikraoba, izay afaka mifehy tsara ny aretin'ny bakteria, toy ny paoma, pozom-bovoka, doro-paka, bobongolo manga, lo malemy ny laisoa, lo ny toerana misy bakteria voatabia, tara-pahazavana, ary voa ovy Rot, shank mainty, angola kôkômbra toerana, ahitra mavesatra, ahitra an-tsaramaso, aretina mikraoba, aretina mikraoba bakteria, teboka ravina bakteria sesame.
Ny Streptomycine dia misy fiantraikany amin'ny bakteria eo amin'ny fifangaroana ambany, ary ny vokatry ny bakteria amin'ny fifantohana avo. Izy io dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria amin'ny Mycobacterium tuberculosis. Izy io koa dia misy fiantraikany amin'ny bakteria Escherichia coli, Shigella, Pertussis, ary Pneumoniae. Tuberculose, infection urinary tract, bacillary disentery, sepsis, sns. Ny fihinana an'ity fanafody ity dia mety hiteraka tsy fahatomombanana manodidina ny molotra sy ny tarehy, izay hisy fiatraikany amin'ny hozatra cranial fahavalo rehefa ampiasaina. Ny fampiasana maharitra an'io fanafody io dia mety hiteraka fahasimban'ny voa.
Tamin'ny taona 1945 dia nizara ny loka Nobel ho an'ny fitsaboana i Fleming, Flory, ary i Chan ho fanekena ny nahitan'izy ireo ny fanafody manasitrana voalohany ho an'ny aretina mikraoba-penisilinina. Saingy ny penicillin dia tsy mandeha amin'ny bakteria maro karazana, ao anatin'izany ny tioberkilaozy, ny pathogenan'ny tuberkulose. Ny tioberkilaozy dia iray amin'ireo aretina mampidi-doza indrindra amin'ny olona.
Tamin'ny taonjato faha-20 dia olona sahabo ho 100 tapitrisa no mbola matin'ny tuberkulose. Ireo mpanoratra malaza toa an'i Chekhov, Lawrence, Lu Xun ary Orwell dia maty tsy tonga volana avokoa noho ny tioberkilaozy. Ny dokotera eran'izao tontolo izao dia nanandrana fomba isan-karazany hitsaboana tuberkulose, saingy tsy misy na iray aza amin'izy ireo tena mandaitra. Ny fijaliana amin'ny raboka dia midika fanamelohana ho faty. Na dia taorian'ny nahitan'i Koch tuberculosis Mycobacterium tamin'ny taona 1882 aza dia tsy nihatsara hatry ny ela io toe-javatra io. Ny vokatry ny majika an'ny penisilinina nitondra fanantenana vaovao ho an'ny olona. Mety misy antibiotika mitovy amin'izany ve hitsaboana tuberkulose amin'ny fomba mahomby?
Azo antoka, volana vitsivitsy taorian'ny nahazoana ny loka Nobel tamin'ny 1945, ny 22 febla 1946, nanambara ny profesora ao amin'ny Oniversiten'i Rutgers Selman A. Waksman fa nahita ny antibiotika faharoa nampiasainy tao amin'ny tobim-pitsaboana ny laboratoara. streptomycin, dia misy fiatraikany manokana amin'ny bacilli tuberkulosis, ary nanomboka ny vanim-potoana vaovao ananan'ny olombelona mandresy tuberkulosis. Tsy toy ny penicillin, ny fahitana ny streptomycin dia tsy tongatonga ho azy akory, fa ny vokatry ny fikarohana maharitra sy voalamina tsara.
4. Vokatry ny fanafody
Streptomycin dia fanafody aminoglycoside. Fomba fiasa Streptomycin dia ny fiasan'ny ribosome amin'ny bakteria, ny fanakanana ny synthesis ny proteinina amin'ny bakteria, ary ny fanimbana ny fahamendrehan'ny fonon'ny sela bakteria. Ny bakteria saro-pady dia manana rafitra fitaterana antibiotika miankina amin'ny oksizenina.
Streptomycin afaka miparitaka aloha amin'ny alàlan'ny porin'aretin'ny sela ivelany amin'ny alàlan'ny fanaparitahana passive, avy eo miditra amin'ny sela amin'ny alàlan'ny fonon'ny sela amin'ny alàlan'ity rafitra fitaterana ity, ary mifatotra tsy tapaka amin'ny subunit 30S ribosomal mitoka-monina, mitarika ny famotehana ny toerana A, ary avy eo:
Sakano ny fametrahana marina ny aminoacyl tRNA amin'ny toerana A, manelingelina ny fivorian'ny ribosome miasa, ary manakana ny fananganana sarotra manomboka ny 70S;
Ampidiro ny tsy fitoviana amin'ny triplet code tRNA sy mRNA, ka mahatonga ny subunit 30S an'ny ribosome tsy miova mamaky ny kaody génétique, mitarika synthesie proteinina tsy mandeha sy tsy mandeha;
Sakano ny faran'ny famaranana tsy hamatotra ny tranokala A, mba tsy hamotsorana ny rojo peptide mifangaro, ary hisorohana ny fisarahana amin'ny ribosome 70S tsy miova;
manakantsakana ny fizotran'ny depolymerisation sy polyribosome, izay mahatonga ny fihenan'ny ribosome amin'ny bakteria. Streptomycin dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria Mycobacterium tuberculosis, ary ny fatrany mampihena farafahakeliny (MIC) amin'ny ankapobeny dia 0.5mg / L. Ny mycobacteria atypical dia mahatohitra ny streptomycine matetika.
Ny streptomycin dia mandaitra amin'ny bacilli marobe ratsy toy ny Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Brucella, Pasteurella, Meningococcus ary Neisseria gonorrhoeae, sns. Streptomycin dia manana fihetsiketsehana bakteria ratsy amin'ny ankamaroan'ny cocci tsara gram toy ny Staphylococcus aureus. Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa ary bakteria anaerobika dia mahatohitra ny streptomycin.
Streptomycin dia mety amin'ny tularemia, na ampiarahina amin'ny fanafody antibiotika hafa ho an'ny pesta, granulomatosis venereal, brucellosis, tazo manaikitra manaikitra, ary azo ampifangaroina amin'ny penicillin hitsaboana na hisorohana ny virosin'ny Streptococcus na Enterococcus vokatry ny endocarditis.
Streptomycin dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody anti-tuberculosis hafa ho an'ny tioberkilaozy samihafa na aretina mikôkozika hafa vokatry ny Mycobacterium tuberculosis.
Streptomycin Ampiasaina miaraka amin'ny zava-mahadomelina anti-tuberculosis hafa ho an'ny trangana tuberculosis voalohany ateraky ny Mycobacterium tuberculosis, na aretim-po mycobacterium hafa.
Ny vokatra dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tularemia irery na miaraka amina fanafody anti-bakteria hafa ho an'ny fitsaboana pesta, granuloma inguinal, brucellosis, tazo manaikitra manaikitra, sns.
Azo ampiarahina koa izy io penisilinina or ampicillin hitsaboana ny endocarditis vokatry ny Streptococcus viridans na Enterococcus faecalis.
2. Dosis Streptomycin
Amin'izao fotoana izao dia inoana fa ny tsindrona 750 mg isan'andro ho an'ny olon-dehibe dia mety hahatratra ny tanjon'ny fitsaboana. Taloha dia 500 mg no narotsaka intramuscularly indroa isan'andro, ary ny vokadratsy dia nitovy tanteraka tamin'ny tsindrona intramuskular. Noho izany, ny doka fampidirana intramuskular 750 mg dia 250 mg latsaka isan'andro, noho izany dia mihena koa ny voka-dratsy.
Ny fatra dia azo ampitomboina na avo roa heny ho an'ny marary tsirairay izay marary mafy, saingy ny fotoana fampiharana maharitra dia tsy tokony ho lava loatra, amin'ny ankapobeny tsy mihoatra ny 1 herinandro, ary tsy maintsy ampiharina amin'ny fandinihana akaiky. Ny fatra ho an'ny be antitra dia tokony hahena araka ny tokony ho izy. Ny dosie ho an'ny ankizy dia manodidina ny 25 mg isan-kilao ny lanjan'ny vatana isan'andro. Tokony hojerena akaiky koa izy ireo.
Mampiasa izahay streptomycin sulfate izao. Nisy dihydrostreptomycin taloha. Satria marobe ireo marary manana fihainoana maharitra (marenina), ankehitriny dihydrostreptomycin dia nesorin'ny State Medical Administration ary tsy novokarina intsony.
1. Fihetsika manohitra
A. Fihetseham-po amin'ny alikaola
samy Streptomycin ary dihydrostreptomycin dia azo ampifangaroina amin'ny proteinina serum mba hamorona antigen feno, fa ny antibodies novokarina dia samy hafa, noho izany dia tsy misy fanehoan-kevitra. Ny dihydrostreptomycine dia azo ampiasaina ho an'ireo izay tsy mahazaka streptomycine.
Ny fihenan'ny alikaola dia misy: aretin-koditra (0.3% -11%), izay azo aseho ho maimaika maculopapular, urticaria, erythema, maimaimpoana toy ny kitrotro, maimaika toy ny tazo mena, ratra toy ny pemphigus, maimaika toy ny eczema, purpura, ary angioedema. Amin'ny tranga goavambe dia mety hitranga ny fikorontanana anaphylactic, ary ny fanehoan-kevitra mahery vaika dia mety hiteraka tsy fahampian-dra hemolytic hemémôlisika, hemoglobinuria, hatairana, ary tsy fahombiazan'ny voina mamaivay.
Streptomycin dia mety hiteraka fahasimbana kely eo amin'ny voa, ary ny marary dia mety hiteraka proteinuria, urin-dra, sns, izay amin'ny ankapobeny tsy misy fiantraikany amin'ny fanafody mitohy. Marary vitsivitsy no mety nihena ny fiasan'ny voa, saingy afaka miverina izy ireo aorian'ny fijanonany ny zava-mahadomelina. Ny fihinanana fanafody toy ny sodium bicarbonate dia afaka mampihena ny fahafahan'ny proteinuria. Leukopenia dia mahazatra kokoa, ankoatry ny neutropenia indraindray, ny trombositopenia, ny anemia aplastika, sns. Notaterina fa ny tsindrona intratympanika ny vokatra dia nampiasaina hanasitranana ny aretin'i Meniere, ary 95% ny marary no nanjary ninina fa nijanona ny fihainoana.
B. Fihetsika manapoizina
Ny fahakiviana, fanina, marenina sns ... Matetika, ary ao anatin'ny 10 andro aorian'ny fanafody dia miseho izy ireo. Ny tranga fohy indrindra dia mitranga ao anatin'ny 20 minitra aorian'ny tsindrona, izay maharitra 1 ka hatramin'ny 6 ora, ary ny tranga henjana dia afaka mitohy mandritra ny 24 ora. Mety hitranga ny fahatsentsenan'ny alahelo, fanina, diskinesia, aretin'andoha, havizanana, mandoa, fikosoham-bolo. Amin'ny tranga goavambe, ny hatsembohana, ny dyspnea ary ny fikorontanana dia tsy mora miavaka amin'ny fikorontanan'ny anaphylactic. Na izany aza, ny fanehoan-kevitra mahery vaika dia mahazatra kokoa ny manangona na miharatsy tsikelikely. Amin'ny tranga sasany, ny fihetsika dia mitranga amin'ny fiandohan'ny tsindrona fotsiny ary manjavona avy eo. Ny fihetsika mahery vaikan'ny streptomycine dia matetika inoana fa misy ifandraisany amin'ny fahalotoany.
Ny Streptomycin dia manimba kely ny voa, miseho ho proteinuria sy urinà tubular, ny sasany izay mihena vetivety ny fiasan'ny voa, izay azo averina aorian'ny fijanonan'ny zava-mahadomelina. Tsy fahita firy ny fahasimbana voa maharitra. Vokatry ny famonoana ny tsoka-taolana: miseho toy ny leukopenia, thrombositopenia, anemia aplastika ary oligocytosis. Leukopenia dia mahazatra, raha tsy fahita firy anemia aplastic sy pancytopenia. Mora ihany koa ny miteraka hirsutism, conjunctivitis, arthralgia, myocarditis, encephalopathy misy poizina, sns.
Allergy. Ny marary tsy mahazaka aminoglycoside iray dia mety tsy mahazaka aminoglycosides hafa. Ity zava-mahadomelina ity dia mifanohitra amin'ny olona manana tantaran'ny allergy streptomycin.
Ny streptomycin dia afaka mamakivaky ny plasenta, ary ny fifantohany amin'ny rà tadim-poitra dia sahala amin'ny an'ny ra-reny. Voalaza fa streptomycin dia niteraka fahasimbana teo amin'ny foetus olombelona. Ny vehivavy bevohoka dia tokony handanja tanteraka ny lafy tsara sy ny lafy ratsy.
Ny marary antitra dia afaka mamokatra fanehoan-kevitra misy poizina isan-karazany aorian'ny fampiasana aminoglycosides, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fanaraha-maso ny asan'ny voa (ny tsara indrindra dia ny fandrefesana ny fahazoana kôlininina) mandritra ny fitsaboana aminoglycosides. Ny olona manana fiasan'ny voa ara-dalàna dia mety hanjary tsy hihaino ihany koa aorian'ny fanafody. Ho fanampin'izany, ny marary efa antitra dia tokony mampiasa fatra kely kokoa hifanaraka amin'ny taonany, ny fiasan'ny voa ary ny fiasan'ny hozatry ny cranial.
Ny marary tsy mahazaka aminoglycoside iray dia mety tsy mahazaka aminoglycosides hafa.
Ity vokatra ity dia mety hiteraka fahasimbana ao amin'ny nerve vestibular sy auditory.
Satria ny vokatra dia mety hiteraka sakana amin'ny neuromuscular, ka miteraka fahalemen'ny hozatra taolana.
Nephrotoxic ny vokatra.
Mandritra ny fitsaboana, ny saina dia tokony horaisina amin'ny fitiliana urinary matetika sy ny fitsapana ny fiasan'ny voa mba hisorohana ny fiasan'ny nephrotoxic mahery sy ny fitsapana fihainoana (indrindra ny fihainoana matetika) izay tena manandanja indrindra amin'ireo marary efa antitra.
4. Fifandraisana rongony
Ny streptomycin sy ny aminoglycosides hafa ampiasaina miaraka na ampiharina miandalana eo an-toerana na amin'ny rafitra dia afaka mampitombo ny mety hisian'ny ototoxicity, nephrotoxicity ary ny sakana neuromuscular. Mety hitranga ny fahaverezan'ny fihainoana, ary mety hanjary marenina rehefa ajanona ny zava-mahadomelina; ny fahaverezan'ny fihainoana dia azo averina indray na tsia. Ny fanakanana neuromuscular dia mety miteraka fahalemen'ny hozatry ny taolam-paty, famoizam-po na fifamoivoizana (apnea). Ny fanafody anticholinerase na sira calcium dia afaka manampy amin'ny laoniny ny fanakanana.
Ny fampifangaroana ny streptomycin sy ny neuromuscular blockers dia mety hampitombo ny sakana amin'ny neuromuscular, ka miteraka fahalemen'ny hozatra, ny fahaketrahana amin'ny fihenan'ny taovam-pisefoana na ny paralysis (apnea). Fampifangaroana ny streptomycin miaraka amin'ny capreomycin, cisplatin, asidra diuretic, furosemide, na vancomycin, na fampiharana lohahevitra na rafitra mitohy, dia mety hampitombo ny ototoxisialy sy ny nephrotoxicity, ny fahasimbana amin'ny fihainoana ary na ny marenina aza.
Ny fampiharana eo an-toerana na amin'ny rafitra ny streptomycin sy cefalotin dia mety hampitombo ny nephrotoxicity.
Ny fampifangaroana ny streptomycin sy polymyxins, na ny fampiharana eo an-toerana na ny rafitra mifandimby, dia mety hampitombo ny nephrotoxicity sy ny sakana neuromuscular. Ity farany dia mety hiteraka fahalemen'ny hozatry ny taolam-paty, ny fahaketrahana amin'ny lalan-pisefoana na ny paralysisa.
Streptomycin efa nampiasaina tamin'ny klinika nandritra ny antsasaky ny zato taona, ary mbola io no fanafody anti-tuberculosis voalohany. Tato anatin'ny taona vitsy lasa. Noho ny fitomboan'ny soritr'aretin'ny tuberkulose mahazaka zava-mahadomelina dia ampiasaina amin'ny dingana voalohany amin'ny tuberkulose izy io.
Ny streptomycin dia azo ampiasaina irery amin'ny tularemia, na azo ampiarahana tetracycline hitsaboana areti-mandringana sy brucellosis, ary penisilinina hitsaboana Streptococcus viridans endocarditis.
BALLYA manome a betalactam-tetracycline-streptomycin-chloramphenicol-combo-test-kit hilaza aminao raha misy streptomycin, beta lactam, tetracycline ary chloramphenicol residu amin'ny vokatra ronono nohaninao isan'andro.
University of Michigan: streptomycin